IMacOS ePhakamileyo yeSierra, iBMW yemisebenzi, iziphumo zezemali, kunye nokunye. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
IMacOS ePhakamileyo yeSierra, imisebenzi yeBMW, iziphumo zezemali, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Ngolwesihlanu uphelileyo uninzi lwenu olusilandelayo ndivela eMac sele unayo ezandleni zakho i-iPhone X ekudala ilindelwe, ngokungathandabuzekiyo yenye yeefowuni ezilindelwe ngabasebenzisi beApple kunye nabangengabo abasebenzisi. Ngale ndlela, iveki iqale yomelele kwaye sele sinayo inguqulelo entsha ye-iPhone ezitalatweni kwaye kubonakala ngathi ibe yimpumelelo yokwenyani, kodwa sinezinye iindaba ezinomdla nezibalulekileyo esinokuzixelela.
Kule meko enye yezona zibalulekileyo luhlaziyo olutsha lweMacOS ePhakamileyo yeSierra, inguqulelo yayo engu-10.13.1, kodwa kukho ezinye iindaba ezimbalwa esinokuthi sizibonakalise kule veki ihambelana ngokusesikweni nokufika kukaNovemba ishiya inyanga nje ixesha kude kufike iMac Pro entsha.
Ezokuqala zeendaba ezibalaseleyo njengoko besitshilo ekuqaleni azinakuba ngaphandle kokufika kwe IMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.1 Bonke abasebenzisi beMac.Kule meko uphuculo lwanele kunye I-emoji entsha njengenoveli ebonakalayo.
Ezi ndaba zilandelayo zibhekisa kwi USteve Jobs ifandesi yeBMW. Indlu yefandesi uSotheby ukwazile ukuhlela ifandesi kuba umnini wesithuthi ngoku ufuna ukukhupha kuye amawaka ambalwa eedola. Ekuqaleni, imoto yayiyeyenye CEO, Leyo ye-Oracle, egama linguLarry Ellison othi ngo-2000 anike imisebenzi le jewel imxelele ukuba inene ummangaliso ohambelana nefilosofi yakhe yobomi.
Ngaba ungomnye wabo batyikitye iinkonzo ze-Apple ngeakhawunti ye-imeyile yomntu wesithathu (i-Gmail, Yahoo!, Outlook, njl. Ngaba uyafuna ukuyitshintsha le akhawunti ye-imeyile ye-Apple? Ewe, ukusukela ngoMvulo odlulileyo, iApple ikuvumela ukuba wenze olu tshintsho kwenye yeeakhawunti zayo I-imeyile ephela kwi @icloud, @ mac.com okanye @ me.com.
Iindaba zamva nje zibhekisa kwiziphumo zezemali zekota yesithathu ka-2017, Ikota enye yezemali yenkampani, kwaye evala unyaka we-2017. Njengesiqhelo, iApple iphinde yaphula ezona zibikezelo zabahlalutyi kwaye kwimeko yeIMac ikwazile ukuthengisa ngepesenti ezili-10 ngaphezulu kwangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Ngoku abo banayo i-iPhone X yokonwabela ubuhle bayo, abo bayilindeleyo, inkuthazo yokuba kuncinci. NgeCawe emnandi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » IMacOS ePhakamileyo yeSierra, imisebenzi yeBMW, iziphumo zezemali, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
IJamstick +, funda ukudlala ikatala kwiMac yakho
IPan Pan, umdlalo wevidiyo onengqondo ojoyina iMac App Store